Sawirro: Fatahaadda wabiga Jubba oo khasaare xoogan gaystay iyo gurmad socda. – Calamada.com
Sawirro: Fatahaadda wabiga Jubba oo khasaare xoogan gaystay iyo gurmad socda.
calamada May 20, 2018 1 min read
Fatahaad xooggan oo uu sameeyay wabiga jubba ayaa cagta marisay boqolaal tuulo oo wabiga jiinkiisa ku safnaa kuwaasi oo beeralay ahaa, sida aad sawirada ku aragtaan biyihu waxay cagta mariyeen dhammaan beerihii iyo dalagii u baxayay dadkaasi iyo sidoo kale guryihii ay deganaayeen intaba, haatanna iyaga oo faro maran ayay ku noolyihiin meelo kooban oo taagag ah, dhulkaasi oo isaga laftiisa ay cabsi ku haysato oo xayawaankii dhan uu kusoo ururay.
Dhawaan idaacadda Andalus ayaa qabatay barnaamijyo taakulayn loogu ururinayo dadkaasi, waxana xaaladda ka waramay qaar ka mid ah odayaal iyo culimo goobta soo arkay oo qaylo dhaan u diray bulshada.
Halkan ka dhagayso warbixintii dadka soo arkay.
Gudidada isku xilqaantay howshan ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay dadkaasi gaarsiin doonaan taakalaynta yar ee ay ka ururiyeen bulshada dhexdeeda iyagoo doonyo isticmaalaya, si ay u noqoto dhiig joojin, waxayna bulshada muslimiinta ka codsadeen in ay kala qayb qaataan.
Hadaba akhriste haddii dhiig muslim uu kugu jiro ka qayb qaado badbaadinta dadkan ku halligmay biyaha oo la soo xiriir gudida ku howllan taakulaynta, waxanad ka heli kartaa taleefanka nambarkiisu yahay 615447733.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 04-09-1439 Hijri.
Next: Roob Xoogan Oo Saacado Badan Oo Xiriir Ah Ka Da’ay Magaalada Xamar.